တုန်ခါမှုနှင့်အခြားအပျော်အပါးများ - သင့်တော်မှုနှေးကွေးသောအခါ (၂၀၁၁) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
[ဒါ့အပြင်တွေ့မြင် vibrators နှင့်“ Dead Vagina Syndrome” (သုတေသနနှင့်ပင်မသတင်းစာ)]
သင်သည်လိင်ကစားစရာများ (သို့) အင်တာနက်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုအလယ်အလတ်အဆင့်တွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။ အဖြေသည်သင်၏ ဦး နှောက်ထဲတွင်ရှိသည် - ပြင်ပအကြံဥာဏ်များ၊ ဉာဏ်ပညာသို့မဟုတ်တရားသေအယူဝါဒများတွင်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ ဦး နှောက်၏ရှေးဟောင်းအစာစားချင်စိတ်ယန္တရား၊ သင်၏ဆုလာဘ်အခြေအနေ၏အခြေအနေပေါ်တွင်မူတည်သည်။
သေချာတာပေါ့, သင့်ဦးနှောက်ကို နိုင် အထူးသဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇမိတ်ကပ်သို့မဟုတ်အတိတ်ကစိတ်ဒဏ်ရာများကြောင့်ပြင်းထန်သောနှိုးဆွမှုအတွက်အထူးသဖြင့်ထိခိုက်လွယ်သည်။ သင့် ဦး နှောက်ကိုဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ပေးလဲဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်။ ဒီအမျိုးသမီးအတွေ့အကြုံကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။
တုန်ခါမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုလုံးဝစိတ်ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကောလိပ်တွင်တ ဦး တည်းကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ခေတ်သစ်လိင်ဆိုင်ရာစွမ်းအားရှိသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုထင်ကာ၎င်းသည်အလုပ်ကိုမည်မျှထိရောက်စွာအောင်မြင်နိုင်မည်ကိုမယုံနိုင်ခဲ့ပါ။ အရမ်းကောင်းပါတယ် တစ်လအတွင်းမှာကျွန်မရဲ့ရည်းစားနဲ့အော်ဂဇင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး၊ ပြီးတော့လအနည်းငယ်အကြာမှာအဲဒါကိုကိုယ့်လက်နဲ့တောင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ တုန်ခါသူသည်အမှိုက်ပုံးထဲရောက်သွားပြီးအပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်၏တုန့်ပြန်မှုသည်ပြန်ပေါ်လာသည်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာပြီးတဲ့နောက်အခုတောင်မှငါဟာတစ်ခါတစ်ရံအပြင်းအထန်လှုံ့ဆော်မှုကိုလက်လွတ်သွားတုန်းပဲ။ သို့သျောလညျးငါကျိန်းသေကျောက်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုရှိခြင်းလက်လွတ်မပါဘူး။
တူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုငါရှောင်ခဲ့တယ် ဒါဟာအရမ်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးတယ်၊ ငါချက်ချင်းချိတ်ဆက်မိမယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါတခါမှ masturbating ကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါစာသားအလွန်ပြင်းထန်သောကြောင့် (တစ်ချိန်ကအစစ်အမှန်ဘဝကဲ့သို့မဟုတ်!) တစ်မိနစ်ထက်လျော့နည်းလာ၏။ စစ်မှန်သောဘဝလိင်သည်၎င်းကိုမည်သည့်အခါကမျှတိုင်းတာနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ငါခြွင်းချက်ဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်ငါကကိုယ့်ကိုကိုယ်ကောင်းစွာငါသိ၏။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုပုံမှန်စတင်အသုံးပြုပါက၎င်းမပါဘဲဖွင့ ်၍ မရနိုင်သောသူများထဲမှတစ် ဦး အဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားလိမ့်မည်။ ရပါတယ်ကျေးဇူးပါ။ ငါသည်ငါ့လိင် - ဘဝအော်ဂဲနစ်စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်။
သဘာဝအနည်းလမ်းများကို အသုံးပြု. orgasm (လက်ချောင်းများနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းထင်) ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအစသင့်ဦးနှောက်ကိုင်တွယ်ရန်ပြောင်းလဲကြောင်းကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဖို့ရပ်တည် အဆိုပါထူးဆန်းမူးရူး။ မဟုတ်သလိုသင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်လျှော့ဖွယ်ရှိ superstimulating တစ်ခုခုအတွက်ရံဖန်ရံခါအလိုလိုကျလှနျးခွငျးဖွစျသညျ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, လွန်း supernormal ဆွ အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ကိုအချို့အတွက်အနည်းဆုံးတစ်ဦးမှာပြဿနာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်ဦးနှောက် sensitivity ကိုလျော့ချခြင်း, အရှင်စိတ်ကျေနပ်မှုပေးနိုင်သည်။
ကျွန်မသူမတကယ်သူမ၏ vibrator ကို အသုံးပြု. သို့ရတယ်ဘယ်မှာသူမ၏အသက်တာ၌ကာလရှိခဲ့ပါသည်ကပြောပါတယ်သူတစ်ဦးရည်းစားရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမကဒါ desensitized ဖြစ်လာကြသောကြောင့်, ဒါပေမယ့်သူမလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူ orgasm မှမိမိကိုယ်ကိုလုံးဝမရခဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်တုန်ခါဆေးလိပ်ဖြတ်, ငါသူမပြန်ပုံမှန်ရ6လခနျ့သူ့ကိုသိမ်းပိုက်ဆိုပါတယ်ထင်ပါတယ်။
အတွက်သင်တန်းသားများကို၏ထက်ဝက်နီးပါး တဦးတည်းလေ့လာမှု သူတို့က vibrator ရဲ့ supernormal stimulation အပေါ်မှီခိုဖြစ်လာနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ဖော်ပြခဲ့သည်။
'Supernormal' သည် ဦး နှောက်၏အကျိုးကျေးဇူးများသော circuit တွင် neurochemicals များစွာကိုထုတ်လွှတ်သောလှုံ့ဆော်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများယေဘုယျအားဖြင့်ကြုံခဲ့ရသည့်မည်သည့်အရာထက်မဆိုပိုမိုစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်သည့်အခါဤသို့ဖြစ်လာသည် ဤအပိုအာရုံကြောဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်မဟုတ်သောလှုံ့ဆော်မှုကိုအလွန်တန်ဖိုးရှိသောအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်လှည့်စားသည်။ ငါတို့အလွယ်တကူချိတ်ဆက်ဖြစ်လာနိုင်သည့်အခါပါပဲ။ (ထပ်မံကြည့်ရှုရန်) မူးယစ်အပြုအမူ.)
မည်မျှ coercive superstimuli ဖြစ်နိုင်သည်ကိုနားလည်ရန်ဤအချက်ကိုစဉ်းစားပါ - သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ပုံကြီးချဲ့ထားသောအမှတ်အသားများ (ဥပမာ - အိမ်ထောင်ဖက်၏ဆန္ဒရှိမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်အထီးအသုံးပြုသောအချက်ပြမှုများ) ဖြင့်ဒြပ်လိပ်ပြာ "မိတ်လိုက်" များကိုတည်ဆောက်သောအခါ၊
ငွေအ ၀ တ်လျှော်ထားသော fritillary လိပ်ပြာသည်အလျားလိုက်အညိုရောင်အစင်းများပါ ၀ င်သည့်လိပ်ပြာအရွယ်အလှည့်ဆလင်ဒါဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွခြင်းခံရသည်။
ပုံကြီးချဲ့လှုံ့ဆော်မှုများကြောင့်အရူးလုပ်သောအမျိုးသားများသာဖြစ်သည်။ ငှက်မကြီးများသည်ကြီးမားသော၊ အတု ကြက်ဥနှင့်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လျစ်လျူရှု။ Supernormal လှုံ့ဆော်မှု စာရေးသူ Deirdre Barrett ကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော်မှုများကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်“ စရိုက်လက္ခဏာများကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်အစစ်အမှန်အရာများထက်ပိုမိုအားကောင်းသည့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ဟူသောထူးဆန်းသည်။
cam2cam စကားပြောခန်း, ထွက်မဆိုလိင်တံလုပ်ဆောင်ကြောင်း junk အစားအစာ, ဆေးဝါး, လိင်ကစားစရာသွေးဆောင်, ကာစီနိုလောင်းကစားရုံပြောင်, ပိုကြီးတဲ့-ထက်ဘဝဗီဒီယိုဂိမ်း: အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုတက်ပွင့်လင်းသောဒြပ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာစဉ်းစားပါ။
အင်တာနက်ကိုယ်နှိုက်က hyperstimulation နှင့်တူသည်။ များစွာသော tabs များဖွင့် / multitasking လုပ်ခြင်း, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရာများကိုပိုက်ကွန်မှဆွဲထုတ်ခြင်း။ ငါ့ ဦး နှောက်ဟာအမြဲတမ်းတစ်ခုခုမှ enter ည့်ခံချင်တယ်လိုပဲ။ စာအုပ်တွေဖတ်တာဟာငါ့အတွက်မလုံလောက်ဘူး။
ဤရွေ့ကားသင်၏ဘိုးဘေးများသင်တတ်နိုင်သမျှလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူလုပ်ကြံလို့မရဘူးသွေးဆောင်မှုဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည်ပြောင်းပြန်ခက်ခဲသောစိတ်ရှုပ်ထွေးသော ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် မီးခိုးရောင်အမှုလျှော့ချရေး မြီးကောင်ပေါက်များ၏ဦးနှောက်ထဲမှာ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း နှင့် ကျော် လွန်း, ဦးနှောက် function ကိုပြောင်းလဲပစ်မှပြသခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်အလွန်အမင်းခန့်မှန်းနိုင်သော်လည်းအစားအစာနှင့်လိင်သည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်မတူဘဲနှစ် ဦး စလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ်တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော (ထိပ်တန်း ဦး စားပေး) အဖြစ်စာရင်းသွင်းထားသည်။ ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်အခြားဆွဲဆောင်စရာများနှင့်ပြproblemsနာမရှိသော်လည်းအစားအစာနှင့်လိင်ဆိုင်ရာဗဟုသုတများစွာနှင့်ချိတ်ဆက်မိနိုင်သည်။ ခုနစ်ဆယ်ကိုးရာခိုင်နှုန်း အမေရိကန်များ၏ယခုအဝလွန်နှင့်တစ်ဝက်အဝလွန်ဖြစ်ကြသည်။ အားဖြင့် အချို့အကောင့်အမေရိကန်ဝန်ကြီးများ၏တစ်ဝက်နှင့်အတူပြဿနာများသတင်းပို့ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် 2001 အဖြစ်အစောပိုင်းအဖြစ် porn အသုံးပြုခြင်း။
အဓိကအချက်မှာပြင်းထန်သော“ သဘာဝ” အပျော်အပါးသည်အန္တရာယ်များသောအလိုလိုကျရောက်ခြင်းသို့ပြောင်းလဲသွားခြင်းပင်ဖြစ်သည် မင်းအတွက် (သို့မဟုတ်သင့်တစျဦးကိုခစျြ)-၎င်းသည်အစောပိုင်းကဘဝတစ်ချိန်ချိန်တွင်အတော်အတန်အပြစ်ကင်းပုံရှိသော်လည်းသင့်သူငယ်ချင်းများအတွက်ပြtroubleနာမရှိဟုထင်ရသော်လည်း ဤပြောင်းလဲမှုသည်သွေးဆောင်မှုနှင့်ပြည့်နှက်နေသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အတော်အတန်အပြစ်မရှိပါ။ Eskimos သည်တစ်နေ့လုံးတံဆိပ်ခတ်စက်ကိုပြုံးပြုံးလေးဖြင့်စားသည်၊ သို့သော်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့် MacDonald's Happy Meal ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမရရှိပါကအမေရိကန်ကလေးတွေအများစုသည်ငိုနေကြသည်။
အမြိုးသမီးမြား၏ငါးဆယ်-နှစ်ရာခိုင်နှုန်းပြီးသားတစ်ဦးအဆိုအရသိရသည် vibrators အသုံးပြုနေသည် 2009 လေ့လာချက်. သုံးဆယ့်တစ်ရာခိုင်နှုန်း အမျိုးသမီးငယ်များ၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုနေသည်။ သူကိုတဦးတည်းလုလင်ကို ရှည်လျားသောစစ်တိုက်တိုက်သော်လည်း porn ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ recover, သူ၏ဦးနှောက်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပုံကိုအလှနျသဘောပေါက်ရန်, said:
ကျွန်ုပ်၏အသက်အရွယ်အမျိုးသမီး ၃ ဦး တွင် ၁ ဦး သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်နေသည်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်လိုက်ရင်အရမ်းအေးတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်အလေးအနက်ထားရမယ်၊ ဒါကငါ့အတွက်ရောယေဘုယျပါလူတွေရောတကယ်ကောင်းတယ်၊ မကောင်းဘူး။ ကျွန်တော့်အနာဂတ်ဇနီးရဲ့ ဦး နှောက်ကိုညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်စေလိုတာသေချာတယ်၊ ဒါကြောင့်သူမရဲ့ဘဝနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုတွေဟာပျင်းစရာကောင်းပြီးပျင်းစရာကောင်းပုံရတယ်။ Jeez ဒီရွားလှသည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကြောင့်နည်းပညာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်နှင့်မည်မျှဆိုးရွားနေသည်ကိုတွေ့ရသည့်အတွက်ဝမ်းနည်းပါသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် ၂၀၁၁ လေ့လာမှုတွင်အမျိုးသမီးများကသူတို့၏တုန်ခါမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်ဟုခံစားခဲ့ရခြင်းထက် ၄ င်းတို့၏ဆက်နွှယ်မှုအပေါ်အပျက်သဘောသက်ရောက်မှုများရှိသည်ဟူသောစိုးရိမ်မှုများကိုတင်ပြခဲ့သည်။ သင်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှု (၃ ခု - သင်အကြိုက်ဆုံးကစားစရာများနှင့်ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်နှစ်ခုကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ) အတွက်သုံးခုဖြင့်ပူးပေါင်းရန်လိုအပ်ပါသလား။ အကယ်၍ သာမန်လိင်မှုနှိုးဆွမှုသည်သင့်အတွက်ဤအရာကိုမပြုလုပ်ပါကသင့် ဦး နှောက်သည်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်မေးခွန်းမှာသင်သည်လူစုလူဝေးကိုဖယ်ရှားပြီးသင်ကိုယ်တိုင်“ reboot” လုပ်လိုပါသလား၊ သို့နှင့်သင်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး လိင်ဆက်ဆံရန်ပျော်မွေ့ပါသလော။
သေချာတာပေါ့။ ဒါပေမယ့်သင်ကွောငျးတှေ့ဆိုပါစို့ မပေးနိုင် ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေကြုံနေရခြင်းမရှိဘဲပြန်ဖြတ်? ယင်းတို့တွင်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်ပေမည်။Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှု“) စဉ်ဆက်မပြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုခံစားမှု၊ ဝတ္ထုမိတ်ဖက်များအားအစွမ်းထက်သောဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်း၊ အစွန်းရောက်လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ ပိုမိုပြင်းထန်သောသို့မဟုတ်ပိုမိုနာကျင်စေသောလိင်အကျင့်စရိုက်များကိုစိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊ ") ။
ဤရွေ့ကားတစ်ခါတစ်ရံအလုပ်မှာစွဲလုပ်ငန်းစဉ်၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်နိုင်သည်။ ဦး နှောက်၏အစိပ်အပိုင်းသည် ဦး နှောက်အတွင်းသို့လှုံ့ဆော်ပေးသော dopamine အမြောက်အများကိုအလွန်အမင်းအဖိုးတန်သောအရာများအဖြစ်ထုတ်လွှတ်သည့်အရာများနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကို ဦး နှောက်၏မှတ်ဉာဏ်ထဲတွင်မှတ်သားထားပါ။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားစောင့်မျှော်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်အနီးနားကပ်တိုင်းသင့် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်ကွင်းဆက်သည်ရူးသွပ်နေသောဂျက်ရပ်စယ်လ်ကဲ့သို့ခုန်ကျော်သွားသည်။ ၎င်းကိုလူသိများသည် ာင်း။ သင်တစ်ဦးထိခိုက်လမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်သောအခါ, တောင်းဆိုနေတာမတရားသောစတငျခဲ့သညျ, ခါတိုင်းထက် dopamine တစ်ပိုကြီးပေါက်ကွဲမှုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
သို့သော်ရှိပါသည် ကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထား ကြောင်းာင်းအမှန်တကယ်ဖို့မြင့်တက်ပေးသည် desensitization- နှင့်အပျော်အပါးအတွက် numbed တုံ့ပြန်မှု။ ရလဒ်မှာစိတ်ကျေနပ်မှုကိုရှာဖွေရန်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုလျော့နည်းသွားရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ “ vanilla” တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲမြဲမြဲကိုင်နေသောသက်ကြီးရွယ်အိုများသည်ပိုမိုပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသောအခြားသူများ၊ များသောအားဖြင့်ငယ်ရွယ်သောယောက်ျားများသည် erectile-disfunction ပြproblemsနာများကိုမဖြစ်ပေါ်စေပါ။ ဦး နှောက်ကိုဘယ်လိုကြည့်နိုင်လဲ ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲများ.
ဝိရောဓိ, ကဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူစေနိုင်ပါတယ် လုံးဝတစ် superstimulus အရှုံးမပေး အလယ်အလတ်၌အသုံးပြုရန်ကြိုးစားရန်ထက်။ (အစပိုင်းမှာတော့မကြာခဏပါပဲ အလွန်မသက်မသာသို့သော်။ ) ဖြည့်ညှင်း Conditions တွေကိုတုန့်ပြန် dopamine ၏အပို jolt မုသာဖြင့်တစ်ဦးထိခိုက်ဦးနှောက်ထုတ်ပျက်ကွက်ဘယ်မှာ abstinence တဲ့ကာလအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အကြောင်းပြချက်။ ပြောင်းလဲကျောပုံမှန်မမူကြောင်းကိုတစ်ဦးနှောက်အတွက်, ဖြည့်ညှင်းအစားစိတ်ကျေနပ်မှု၏မတရားသော reverberating နှင့်အတူ aquiver ထိခိုက်မခံတဲ့လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်“ အရာအားလုံးကိုဖြည့်ညှင်းသောအရာအားလုံး” သည်အချို့သောလူများအတွက်သာအချို့သောလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အချို့သောအချိန်များအတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ ဝမ်းသာစရာကသင်သည်ရှည်လျားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအထိသင့်အားစိတ်ထိခိုက်စေသည့်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုကိုရှောင်ရှားပါကဆူညံသော ဦး နှောက်လမ်းကြောင်းများတဖြည်းဖြည်းအားနည်းလာပြီးသင်၏အစာစားချင်စိတ်သည်ပုံမှန်အာရုံခံစားမှုဆီသို့ပြန်လှည့်သွားသည်။ ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုပေးဆောင်။ Mark Hyman, MD သည်အခြား superstimulus အတွက်စွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဤအချက်ကိုပြောကြားသည်။ သကြား:
သကြားနှင့်အတုအချိုမှုန့်များဖယ်ရှားပစ်ပါ။ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကို reset လုပ်ဖို့အတွက်သင်ကရပ်တန့်ပစ်ရမယ်။ သင်၏အစားအစာမှသန့်စင်သောသကြား၊ ဆိုဒါ၊ သစ်သီးဖျော်ရည်များနှင့်အတုချိုသောအရည်တို့ကိုဖယ်ရှားပါ။ ဤအရာများသည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားစေသောဆေးများဖြစ်သည်။
တူညီသောလိင်ကစားစရာများနှင့် erotica အသုံးပြုမှုမှန်သည်။ ဒါဟာလိုအပ်သောဆုတ်ခွာအီမှတဆင့်သွားကြဖို့ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်နှင့် သင့်ဦးနှောက် reboot အလယ်အလတ်အသုံးပြုမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အကြိမ်ကြိမ်ပြင်းထန်သောမတရားသော wrestle ထက်။
"သင်တွင်းထဲကထွက်ချင်တဲ့အခါ ... "
သင်ထင်လျှင်သင်, တစ်လသို့မဟုတ်နှစ်ခုအဘို့လုံးဝရပ်တန့်နှင့်အတူစမ်းသပ်မှု erotica သို့မဟုတ်သင့် vibrator overusing နိုင်ပါသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ပုံမှန် sensitivity ကို (သို့မဟုတ်တိုးလာ sensitivity ကိုမျက်နှာသို့) ဆီသို့ပြန်ရွှေ့ခံစားရနိုင်ပါသလား? သင့်ရဲ့တုန်ခါနှင့်အတူညနေခင်းထက်ပိုပြီးကျေနပ်စရာပရောပရည်၏ညနေခင်းလား? သငျသညျနံနကျစောစောပေါ်ပြန်သွားကြသည်လျှင်, သင်နောက်မှအစွန်းရောက်မတရားသောသတိထားမိသလဲ? သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်ချက်စေသကဲ့သို့, သင်လိုချင်တဲ့ရလဒ်အတွက်ခုတ်မောင်းဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူပေါက်နေသည်။
သင့်ဦးနှောက်ဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးပြန်လည်ရောက်ရှိသကဲ့သို့သင်တို့ကိုပင်မျှော်လင့်မထားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုသတိထားမိနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှစ်ဦးစလုံးဆွေမျိုးလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူသူမ၏ (ကပျက်စီးသွားသော Ovary နှင့်အတူအရေးပေါ်အခန်းခရီးစဉ်အပြီး, နှင့်မတက်ရောက်ဆရာဝန်ကနေသတိပညာအစွန်အဖျား) Magic Wand အပ်သောအခါသူမလည်းဆေးလိပ်သောက်ရပ်တန့်နှင့်သူမ၏အစားအသောက်များတွင်တိုးတက်လာဖို့နိုင်ခဲ့သည်ကြောင်းအစီရင်ခံ ။
ကျွန်တော်တို့ကိုမဆိုတစ်ဦးတစ်ချိန်က-အန္တရာယ်ကင်းပျော်မွေ့နေတဲ့အန္တရာယ်များအလိုလိုကျလှနျးခွငျးသို့ morphed မူကြောင်းကိုလက်ခံဖို့ခဲသည်။ သို့သျောလညျးဖြစ်စေဘဲအပျြောအပါး (အချစ်ဇာတ်လမ်းဝတ္ထု၏အစားဥပမာ, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း) ပြောင်းလဲသွားပြီ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်နိုင်, မကြာခဏပြောင်းလဲကြဘူး။ ဆိုလိုသည်မှာသွေးဆောင်မှုတစ်ခုသည်“ မကောင်း”၊ “ ကောင်းသည်”၊ “ ကိုယ်ကျင့်တရား” သို့မဟုတ်“ အကျင့်ယိုယွင်းခြင်း” ဟုတ်မဟုတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ငြင်းခုံမှုများမှာအဓိကကျသည်။ ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ မင်းအပေါ်မှာ ဒါထွက်သင့်ရဲ့အရသာဆိုးရွားလာခဲ့သည်ပါပြီဘယ်လောက်, ပြောင်းလဲသွားတယ်နှင့်သိရပါတယ်ရှိမရှိ, သင့်ဦးနှောက်၏ sensitivity ကိုပေါ် မူတည်. အဘယ်အရာကိစ္စ, သင်၏မိုင်အကွာအဝေးအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်ပါမည်ဖြစ်ကြသည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းကအကျိုးရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်ယနေ့ခေတ်ဖန်တီးထားသော superstimuli နှင့်သင်၏ပျော်ရွှင်မှုကိုတုန့်ပြန်ရန်မလိုပါ။ ဤတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏ပထမ ဦး ဆုံးသောအမြင်များကိုဖော်ပြထားသည်။
porn သည်ယောက်ျားနှင့်ပြaနာတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်သဘာဝစီးဆင်းနေသောအရည်အားလုံးဆုံးရှုံးသွားသည်။ သူသည်၎င်းအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သောအခါငါမဟုတ်ပါ။ သူက LUBE ကိုရူးသွပ်နေသလိုမျိုးငါထပ်မံလျှောက်ထားရန်သူမငါနှင့်အတူမကျေမနပ်ဖြစ်နေသည်။ ပြင်ပမှာရှိတဲ့ချောဆီတွေအားလုံးကိုတောင်မှကြည့်ရင်၊ ငါဟာညစ်ညမ်းတာနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာထက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ချင်တာကိုတွေးနေမိလို့စိတ်မသက်မသာဖြစ်လာပြီးပျော်စရာလည်းနည်းလာတယ်။ ဒါမှမဟုတ်သူကငြီးငွေ့ခဲ့, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ porn ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနေတဲ့အချိန်မှာခြောက်သွေ့တော့မယ်ဆိုတာသူအမြဲသိတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုသင့်တင့်မျှတစွာ အသုံးပြု၍ ရနိုင်လျှင်၊ မင်းကိုပိုပြီးစွမ်းအား သို့သော် အကယ်၍ သင်မဟုတ်လျှင်သင်မပါလျှင်သင်လုံးဝရပ်တန့်ရန်လိုအပ်သည်။ ငါ "တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်" ဂတိတော်ကြိုးစားခဲ့; အဲဒါဘယ်တော့မှမ ငါလုံးဝရပ်တန့်ခဲ့ရသည်
အချိန်ကာလတစ်ခုအထိညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ပြီးနောက်၊ ငါဟာအဝတ်အထည်များနဲ့ sexy မိန်းကလေးများကိုကြည့်ခြင်းဟာအသည်းအသန်ညစ်ညမ်းတဲ့အထိနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းထွက်ခွာသွားတာထက်အများကြီးပိုသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကပြန်လည်လည်ပတ်နေတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ပုံမှန်အထိခိုက်မခံမှုကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် "သင်အပေါက်တစ်ပေါက်ထဲကိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ အရင်တူးပါတော့မယ်" လုံးဝ။ ဟန်ချက်ညီရန်ပြန်သွားရန်သင့် ဦး နှောက်ကိုအချိန်ပေးပါ။ နောက်ဆုံးတွင်သိမ်မွေ့သောအပျော်အပါးသည်နောက်တဖန်အရသာအဖြစ်မှတ်ပုံတင်လိမ့်မည်။ သင့် ဦး နှောက်ကအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီဆိုရင်၊ လပေါင်းများစွာကြာနိုင် နှင့်မသက်မသာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကျိုးနပ်ပါတယ်
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုတုန်ခါမှုနှင့်အခြားအပျြောအပါး: ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမအောင်မြင်မှုများရတဲ့အခါ (2011)"
10 မှာ 22 / 2011 / 4: 19 ညနေ
ဒီအပိုင်း၏ "စိတ်ပညာယနေ့" ဗားရှင်းအပေါ်တင်ခဲ့သည်မှတ်ချက်
အမျိုးသမီးတစ် ဦး (အမျိုးသမီးများရေးသားခဲ့သည် (ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးက“ အမျိုးသမီးများအားသူတို့၏လိင်မှုကိုကြောက်ရွံ့စေရန်” ကြိုးစားနေသည်ဟုဆိုသူအားတုံ့ပြန်မှု)
လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုသဘောဆောင်သောပြောဆိုမှုများအားလုံးကကျွန်ုပ်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်မှာတုန်ခါမှုသည်ကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုငြင်းလိုခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လက်ဖြင့်ဒဏ်ရာရနိုင်သည်ကိုလက်ခံနိုင်ကြောင်းဂျက်တူသည်ဟုဆိုနိုင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ကပြင်းထန်သည့်ငြင်းပယ်မှုကိုလိုချင်သည်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်ပူပြင်းတဲ့သူတုန်ခါမှုကကောင်းမွန်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုတဖြည်းဖြည်းပျော့ပျောင်းလွန်းလို့ငါ့ကိုမေ့သွားစေတယ်၊ ​​အဲဒါကအချိန်နဲ့အမျှနူးညံ့တဲ့ထိတွေ့မှုကိုခံစားဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လာတယ်၊
သတ္တုတွင်းကဲ့သို့သော ၀ င်ခွင့်နှင့်ဤကဲ့သို့သောဆောင်းပါးများသည်ခြိမ်းခြောက်မှုမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘက်စူးစမ်းလေ့လာမှုအတွက်ရှက်ကြောက်ခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များကိုကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်းနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းကိုကန့်သတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားရှက်စေလိုသူတစ် ဦး ချင်း၏လက်ထဲတွင်ရှိသည်။ လိင်အကြောင်းပိုမိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလေလေ၊
12 မှာ 11 / 2011 / 6: 07 နံနက်
အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို Yahoo ပေါ်မှာဤ posted
ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသားများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူများကိုလိင်စိတ်မဆန်ဆန်လုပ်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းသေချာပါသည် အဲဒါဟာလူတွေကိုအကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုမခံစားရသော်လည်း၎င်းတို့သည် ၀ န်ခံရန်လိုသည်ထက်အမျိုးသမီးများသည်ဤရောဂါကြောင့်ပိုမိုထိခိုက်သည်။ ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအစစ်အမှန်အရာများအတွက် libido အတွက်သိသိသာသာဆုံးရှုံးမှုရှိသည်, ငါအလွန်အကျွံ porn စောင့်ကြည့်ဖို့ကြောင်း attribute ။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့လိင်အင်္ဂါကိုစစ်မှန်သောဘ ၀ တွင်တွေ့ရခြင်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာမကောင်းခဲ့ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရှင်ကိုကြည့်ရှုခြင်းမှလှုံ့ဆော်မှုမရှိပါ။ ဒါဟာညစဉ်ညတိုင်းသတင်းကြည့်ရှုတာနဲ့တူတူပဲ။
01 မှာ 13 / 2012 / 6: 48 ညနေ
ကျွန်ုပ်တွင်လိင်တံမရှိသော မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်၌ဤပြproblemနာအတိအကျရှိသည်။
ငါဖတ်ပြီးတဲ့အခါဒါကငါခံစားနေရတာပဲဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။ Porn ဟာငါ့ပြproblemနာဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး ငါအရမ်းကြည့်ကောင်းတယ်၊ အရမ်းငယ်တဲ့အချိန်ကစပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်နေတယ်။ ကျွန်ုပ်အသက် ၂၄ နှစ်သာရှိသေးပြီးကျွန်ုပ်၏အချစ်ဆုံးဘ ၀ သည်အကောင်းဆုံးရုန်းကန်မှုဖြစ်သည်။ ကျွန်မခင်ပွန်းကအတော်လေးနားလည်ပေမယ့်အဲ့ဒါဘာကိုမှငါလုံးဝမပြောနိုင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့စွဲလမ်းမှုအကြောင်းသူ့ကိုမပြောပြခဲ့လို့ပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာ Mine ကပုံမှန်ဖြစ်လာတယ်။ စက္ကူတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်“ ကြမ်းတမ်းခြင်း” တိုးပွားလာသည်။ အရင်တုန်းကအဝတ်အချည်းစည်းကိုလှည့်လာပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ထားကိုစိုးရိမ်မိတဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီ။
ငါခက်ခဲအချိန် clitoral ဆွနှင့်ငါ့စိတျအပိုငျးအပေါ်အချို့သောခက်ခဲအတွေးအပြောင်းအလဲနဲ့မပါဘဲအော်ဂဇင်မဆိုအမျိုးအစားရရှိရှိသည်။ ကျွန်မလိင်ဆက်ဆံနိုင်ဖြစ်ခြင်းလက်လွတ်ကြောင့်အများကြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲကောင်းသောခံစားရတယ်။
ငါ porn ကိုအချိန်အကြာကြီးမကြည့်ခဲ့ဘူး၊ နောက်တစ်ဖန်ပြန်စတယ်၊ အချိန်ကငါ့လိင်စိတ်ကိုမတိုးစေခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဘာကြောင့်လိင်စိတ်မရှိရတာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ အရင်ကအရမ်းပြင်းထန်လွန်းတဲ့လိင်စိတ်တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်ခဲတယ်။ အခုတော့ကျွန်မမထိချင်တော့ဘူး။
ငါ porn နှင့်အမြင်အာရုံအကူအညီအထောက်အပံ့များကိုတက်ပေးခြင်းခက်ခဲများနှင့်ကြာမြင့်စွာခရီးဖြစ်လိမ့်မယ်, ငါ့အမှု၌စဉ်းစားပါ။ လျှင်ငါ, ငါ၏ sensitivity ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်ရှေ့မှာနှစ်ပေါင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ခံစားချက်ရှိသည်။ ဤတွင်မျှော်လင့်များအတွက်ပါ! ဒီရေးသားခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်နှင့်ငါ့အာရုံကိုဒါပေမယ့်တခြားသူတွေလည်းမသာဤဆောင်ကြဉ်း!
စာရေးသူများအနေဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများနှင့်အတူတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုတတ်ကြောင်းနားလည်ထားသည်။ လျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်ထားသည်မှာအမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများအသုံးပြုသောပမာဏနှင့်ပြင်းထန်မှုနှင့်နီးကပ်နေပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုအောင်မြင်ရန်အချို့သောအမျိုးသမီးများသည်လှုံ့ဆော်မှုအချို့လိုအပ်သည်။ တုန်ခါမှုသည်မာရ်နတ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်မိုင်းကိုဖယ်ရှားပစ်တော့မည်မှာသေချာသည်။
01 မှာ 25 / 2012 / 9: 54 ညနေ
ငါ့မှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူမသည်နှစ်ပေါင်းများစွာဆေးဖက်ဝင်အပင်များကိုဆေးလိပ်သောက်နေသူဖြစ်ပြီးသူမသည်ဆေးလိပ်မသောက်ပါကပေါင်းပင်ဆေးလိပ်မသောက်ပါကသူမမှာကောင်းသောအော်ဂဇင်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူမလည်းအလွန်အမင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနေသူဖြစ်ပြီးအရှုံးမပေးလိုပါ။
02 မှာ 21 / 2012 / 3: 25 နံနက်
ထင်ရသောအဘယ်သူမျှမလိင် drive ကို, ဒါပေမယ့်မကြာခဏ porn နှင့် mastubate စောင့်နေကြလော့။ ဒီပြောင်းလဲပစ်ရန်မည်သည့်လမ်း? 19yo ကညာများနှင့်ပထမဦးဆုံးပို့စ်, ဒါကြောင့်အားလုံးမှတော်တော်လေးအသစ်များကို။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၆ နှစ်ကတည်းကလိင်ဆက်ဆံရန်နေရာရှိခဲ့သည်၊ သို့သော် ၁၁ နာရီတွင်အချိန်တိုင်းကြက်ဥမှထွက်သည်။ ငါလိင်ဆက်ဆံရန်ဖိအားပေးခံရသည်နှင့်အငြင်းပွားနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသောဆက်ဆံရေး (၃) ခုသည်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခဏတာ (လအနည်းငယ်၊ ထိပ်များ) ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာအားလုံးတော်တော်လေးယဉ်ခဲ့ပေမယ့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့် (ငါသို့လုံးဝဘယ်တော့မှခဲ့ပြီးသော) ခြောက်သွေ့သောဘို့ထံမှ handjobs ဖို့ဒါမှမဟုတ်ငါထွက် freaked နှင့်ချက်ချင်းကောင်လေးမှဆွဲဆောင်မခံခဲ့ရကျော်လွန်ပြောင်းရွှေ့အဖြစ်။
ထိုအတောအတွင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ် (တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်ဖြစ်နိုင်သည်) နှင့် porn (တစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်ခန့်) ကိုမှတ်မိနိုင်သည့်အတွက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့ရသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကငါ့ကိုမဖွင့်လို့မရဘူး အဲဒီမှာ ငါ့ကိုနှစ်သက်သောရန်စိတ်အားထက်သန်?
အခြားမည်သူမဆိုသူတို့ porn ကိုခံစားခြင်းနှင့်လိင်ထက်အများကြီးပို masturbating ရှိရာအလားတူအတွေ့အကြုံကိုခဲ့ကြပြီလော
06 မှာ 04 / 2012 / 3: 48 ညနေ
အရင်က SO နှင့်ငါဝေးလံသောဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်, ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် porn သို့စတင်လာသောအခါပါပဲ။ တစ်ခါတစ်ရံတစ်လချင်းစီတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မတွေ့ရသောကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်နေ့သုံးကြိမ်နီးပါးငါကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ပထမနှစ်အတွင်းကျွန်မလိင်ဆက်ဆံတာကမှိန်နေပြီးလိင်ကိစ္စကနေလုံးဝမထွက်နိုင်တာကိုကျွန်မတွေ့ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်သူလုပ်ပြီးတာနဲ့တကယ်အစွန်းရောက်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်လိုက်တယ်။ နှစ်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှညစ်ညမ်းမှုမှာပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးကျွန်ုပ် SO နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုမှာပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့သည်။
ငါ့မှာ SO အသစ်ရှိတယ်၊ ငါတို့အချင်းချင်းတစ်နှစ်ကျော်ကြာတွေ့ခဲ့ကြတာပဲ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအစမှာသူကကျွန်မတို့ကိုလိင်ဆက်ဆံချိန်မှာ၊ ကျွန်မရဲ့စိတ်ဟာတခြားနေရာမှာရှိနေပြီးသူနဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်မရှိဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ တခါတလေလိင်အလယ်မှာငါကသူ့ကိုမဟုတ်ဘဲမကြာသေးမီကကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးသမျှသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ဖတ်ဖူးသည့်အရာတစ်ခုကိုစဉ်းစားမိသည်။ ငါဒီစိန်ခေါ်မှုကိုယူ။ r / kareeza အပေါ်အနည်းငယ်ဖတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် .. အမှုအရာငါတို့အကြားအများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်။ ငါစွမ်းရည်မြင့်ဆက်သွယ်မှုကိုခံစားရတယ်, ငါ့စိတ်ကိုလုံးဝမှာမျောမထားဘူး။ လိင်ကပိုကောင်းတယ်၊ ငါ့ SO နဲ့အတူနေခြင်းကပိုကောင်းတယ်။ အခုဆိုရင်ငါတစ်ယောက်တည်းနဲ့ပဲအော်ဂဇင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်တယ်။ Plus အား orgasms သည် PVO ထက်သာသည်။
07 မှာ 30 / 2012 / 3: 47 နံနက်
မိန်းမများအနေဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလိုအပ်သည်ကိုနားမလည်ဟုပြောခြင်းသည်ရယ်စရာဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့်လေ့လာမှုများကအမျိုးသမီးအများစုသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်မကြာခဏတွန်းလှန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဘယ်သူမှသူတို့ကိုမ ၀ ယ်ဘူးဆိုရင်အမျိုးသမီးလိင်ကစားစရာတွေဘာဖြစ်လို့ရှိရတာလဲ။
ဤဆောင်းပါးနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအထူးကိစ္စနှင့်လည်းရုန်းကန်နေရပြီးကျွန်ုပ်သည်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးတွင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ငါကရက်အနည်းငယ်တခါတလေတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်တယ်။ ငါက porn ကိုသုံးတယ်။ သို့သော်၊ ယင်းသည်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိရန်ပိုမိုခက်ခဲလာသည်နှင့်နှစ်များတစ်လျှောက်ကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုသည့်ညစ်ညမ်းမှုသည်တူညီသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုရရှိရန် ပို၍ အစွန်းရောက် / ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်လာသည်။ ငါ့ရည်းစားနဲ့လည်းအထွတ်အထိပ်မဖြစ်နိုင်ဘူး ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်သင့်အားအရိပ်လက္ခဏာမဖြစ်စေခြင်းမှာအလွန်မှန်ကန်သည်၊ သို့သော်၎င်းမပါဘဲသင်အော်ဂဇင်မဖြစ်နိုင်ပါကစွန့်လွှတ်ရန်ခက်ခဲသည်။
08 မှာ 30 / 2012 / 3: 35 နံနက်
ငါ kinky porn (အများအားဖြင့်လူဆိုးဂိုဏ်း) မှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါမှသာလာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ SO သည်ထိုအရာနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုကကျွန်ုပ်ကိုလာရန်အတွက်ဘယ်သောအခါမျှငါ့ကိုလှည့်မသွားမည်ကိုကျွန်ုပ်စိုးရိမ်သည်။ ငါစိုးရိမ်သင့်သလား ?? ဒီဟာကိုငါဘယ်လိုဖြတ်ပစ်မလဲ။
12 မှာ 11 / 2012 / 3: 39 ညနေ
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၀ အရွယ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်သမိုင်းကြောင်းများစွာရှိသည်။ ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်လိင်ကစားစရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံသည်အပျက်သဘောဆောင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ခန့်ကကျွန်ုပ်သည် vibrator တစ်လုံး ၀ ယ်ခဲ့သည် (အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်၏ clitoris ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်လှုံ့ဆော်မှု၊ ခေါင်းအုံးကြီးများစသည်တို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုတကယ်ကျေနပ်မှုမရှိသောကြောင့်)၊ သို့သော်ဤပလပ်စတစ်လိင်တံသည်ကျွန်ုပ်၏အင်္ဂါဇာတ်အတွက်အလွန်ကြီးလွန်းသဖြင့် ' ရိုက်ထည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တုန်ခါနေသောဤစက်ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ခဏကြာတော့ကျွန်မရဲ့သြတ္တပ္ပစိတ်ကမကောင်းဘူး၊ နောက်ပိုင်းမှာသေးငယ်တဲ့ပစ္စည်းအကြောင်းငါကြားခဲ့ရတယ်၊ အဲဒါကိုရယူဖို့သွေးဆောင်ခံခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကံကောင်းထောက်မစွာတော့ငါမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောအရာကိုသာအလေးပေးနိုင်:
အမှန်စင်စစ်ကျွန်ုပ်သည်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ယခင်ကစွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲခဲ့သောစွဲလမ်းမှုနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အစားအစာသည်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမဟုတ်ပါက၎င်းသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်နှစ်မျိုးစလုံးပင်) ဖြစ်သည် - ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းအပြင်၊ ကျွန်ုပ်ကိုဖွင့်နိုင်သောမသင့်လျော်သောစာဖတ်ခြင်းအကြောင်းအရာ (တစ်ခါတစ်ရံတွင်ညင်သာပျော့ပျောင်းသော) လည်းဖြစ်သည်။ ထိုအခါငါကျိန်းသေနညျးလမျးမြားစှာအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကို overstimulated ပါပြီ။ ကံမကောင်းစွာပဲကျွန်မဟာတစ်ကိုယ်ရေဘဝနဲ့ရှိနေသေးပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ပါ။ လက်မထပ်မီလိင်ဆက်ဆံမှုကိုမယုံဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါဘာမှမလုပ်ဘဲစောင့်နေတယ်။
02 မှာ 05 / 2013 / 9: 46 ညနေ
ExistenceTheorem7 ရက်ပတ်လုံး 21 အချက်များ2နာရီ agoOh, ငါ့ကိုယုံကြည်အချို့သောမိန်းမတို့သည်အဘယ်သူမျှမ FAP လိုအပ်ပါတယ်။
ငါသိသောလူအများစုထက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်လေ့ရှိတယ်။ ၅ မိနစ်ကနေတစ်နာရီလောက်ကြာအောင်ကြိုးစားပြီးမှရနိုင်မယ့်ဗွီဒီယိုကိုရှာဖွေရတာအဆင်ပြေပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းကပျော့ပျောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ငါစခဲ့ပြီးအဲဒါဟာငါရှာတွေ့နိုင်သမျှအကျော်ကြားဆုံးအရာတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့် PC မှာ GB အကွာအဝေးမှာရှိတဲ့ folder တစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ ကွန်ပြူတာနားမှာမဖွင့်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဖိုင်တွေကိုဖုန်းနဲ့ mp3 / video player တွေမှာထားတယ်။ ညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုအကောင့်တစ်ခုရခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့ကိုအရမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကောင်မလေးကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိရတော့သည်။
နောက်အပိုင်းကတော့ပိုပြီးအသေးစိတ်ဂရပ်ဖစ်ပါတယ်။ ဒီအရာအားလုံးကလိင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော့်အမြင်ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲစေတယ်ဆိုတာအသေးစိတ်ပါ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ NSFW ကဒီထက်ပိုပြီးလုံခြုံမှုရှိစေပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ခြင်း၏စိတ်ကူးသည်ကျွန်ုပ်အတွက်စိတ်မဝင်စားပုံရသည်။ ငါကယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ PIV လိင်ဆက်ဆံတာပါ၊ သူက PMO ကြောင့် ED ရှိတာကြောင့်အဲဒါကိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားတာကြောင့်ဒါကိုစုပ်နေတယ်။ သို့သော်အခြားယောက်ျားများနှင့်ကျွန်ုပ်အခြားအရာများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အစဉ်မပြတ်ငါသူတို့ကိုမှုတ်ချင်နှင့်သူတို့ထံမှကနေရတဲ့ထက်ပိုပြီးငါ့ကိုလှည့်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ငါဘယ်သူ့ကိုမှမသွားစေချင်ဘူး၊ ငါသူမကိုဆင်းလာပြီးနောက်ကမ်းလှမ်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်တောင်မှ။ ယောက်ျားတွေငါ့ကိုအလွယ်တကူလက်ချောင်းနိုင်ဘူး; အရာအားလုံးငါ့အဘို့ rougher ခဲ့ကြရသည်။ ငါခွေးနှင့်ပြည်တန်ဆာလို့ခေါ်ချင်တယ်။ ရိုက်နှက်ခံရဖို့တောင်းပန်ခဲ့တယ်၊ ယောက်ျားအများစုကမလုပ်နိုင်ကြဘူး။ လိင်ကိစ္စဟာအခြေခံအားဖြင့်တော့ငါ့အတွက်ချစ်ပေမယ့် ကျွန်မရဲ့လိင်မှုဘ ၀ မှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့အရာအားလုံးဟာကင်မရာနဲ့လခလောက်ပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းစဉ်းစားမိသော်လည်းအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ဆက်ဆံမှုတွင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုဘယ်သောအခါမျှမမြင်နိုင်ပါ။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ငါမိန်းမတွေနဲ့လုပ်ချင်တာကသူတို့ကိုစားပြီးသူတို့ကိုကြိုးနဲ့ချည်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါကကိုယ့်ကိုယ်ကို objectifying မဟုတ်ရုံငါသည်လည်းသူတို့ကို objectifying ခဲ့သည်။ အခြားသူများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အဆင်ပြေသည်ဟုခံစားခဲ့ရသော်လည်းကျွန်ုပ်အတွက်မည်သည့်အရာကမျှမလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါ။ ငါဘယ်လိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ်တယ်။ အဆုံးသတ်ဖို့အတွက်အော်ဂဇင်တုတွေကိုငါအတုလုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒါကမှားနေတယ်၊ ​​ညစ်ပတ်တယ်၊ ငါတစ်ယောက်တည်းနေချင်ခဲ့တယ်။ porn နဲ့လား ငါမှာအပြင်းထန်ဆုံးအော်ဂဇင်ရှိတယ်၊ အဲ့ဒါကိုတစ်နေ့ကနေငါးကြိမ်လောက်လုပ်တယ်။
ငါတော်တော်လေးရှုပ်ထွေးနေပြီးငါ့ PMO ပြproblemsနာတွေကယောက်ျားတွေနဲ့ ED တို့ရဲ့ပြသနာကိုဒီရှုထောင့်ကဘယ်တော့မှမပြဘူးဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိဘူး။ သို့သော်လိင်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုနှင့်ဆက်ဆံရေးများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နစ်နာစေမှုမှာအလွန်ထင်ရှားသည်။ ဒါ့အပြင်သူကကျွန်တော့်ကိုယောက်ျားတွေနဲ့အတူပရောပရည်လုပ်ချင်တာကိုအများကြီးနည်းသွားစေတယ်။ ဒီချစ်စရာကောင်လေးကိုငါဘာကြောင့်စကားပြောဖို့လိုတာလဲ။ သူကိုယ်တိုင်ကကျွန်ုပ်ခံစားရသောခံစားမှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုသူဘယ်တော့မျှပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ” ငါအွန်လိုင်းမှယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်စကားစမြည်ပြောနေတာပဲ၊ ထပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့အတွက်ကွန်ပျူတာကနေလမ်းလျှောက်ထွက်သွားတယ်။ ငါ quickie PMO session တစ်ခုရရန်လိုအပ်သောကြောင့်ငါအတန်းသို့မဟုတ်အလုပ်နောက်ကျလိမ့်မယ်။ ငါသနားစရာကြီးနှင့်ငါကပြောင်းလဲချင်တယ်။ မကြာသေးမီအချိန်ကမှကျွန်ုပ်သည်ဤပြောင်းလဲမှုမှကျွန်ုပ်ပြောင်းလဲခဲ့သောနည်းလမ်းများအားလုံးနှင့်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည်။ ငါ PMO ကင်းတာ ၇ ရက်ရှိပြီ။ အဲဒီမှာအားလုံးပေါ့။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေ၊ ငါ့ခေါင်းကိုတခါတရံမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်နဲ့၊ ငါ့အိမ်ရှေ့လမ်းလျှောက်သွားတဲ့ပထမဆုံးလူကိုဖမ်းချင်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ ကိုယ့်ကသူ့ ဦး နှောက်ကိုထုတ် fuck ဆိုတဲ့။
ဒီတော့ yeah, မင်းသမီးကျိန်းသေဒီအားလုံးကြောင့်ထိခိုက်ရ။
09 မှာ 06 / 2018 / 12: 36 နံနက်
အခြား site မှ
ဤသည်ကိုဖတ်ရှုဖို့ဒီတော့သက်သာရာဖြစ်ပါတယ်။ ငါကအသက် ၂၀ အရွယ်မိန်းကလေးပါ။ ဒါကငါ့ပြproblemနာပါ။ ဤပြproblemနာရှိကြောင်းအစီရင်ခံတင်ပြသည့်အခြားအမျိုးသမီးများကိုလည်းကျွန်ုပ်ရှာမရသေးပါ။ ကြည့်ရသည်မှာ၎င်းတို့သည် porn ကိုမကြည့်ကြပါ။ ငါမည်သူမဆိုနှင့်အတူတစ်နှစ်နှင့်အတူမရှိခဲ့ပါနှင့်ငါအမြဲငါမည်သူမဆိုဖြစ်ဖြစ်နိုင်သည်အထိဆွဲဆောင်ခဲ့သည်ကိုသိသောငါ့ရည်းစားအသစ်အဘို့အနှိုးဆော်ခြင်းကိုမရနိုငျသောအခါငါအကြီးအကျယ်ရှုပ်ထွေးခဲ့သည်။ ငါထင်တာကငါဟာကိုယ့်ကိုကိုယ်သတိရှိခြင်းပဲ (တကယ်တော့စိုးရိမ်စရာမရှိခဲ့ရင်တောင်) ဒါမှမဟုတ်ငါ့ရဲ့ဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ်။
ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆိုင်ရာတက်ကြွသောရွယ်တူချင်းများကြားတွင်ကျွန်ုပ်သည်တောက်ပသောကျန်းမာရေးမီးပွင့်နှင့်တူသည်။ ကျွန်ုပ်၏အားကစားဝါဒသည်ကျွန်ုပ်၏ testosterone ဟော်မုန်းကိုမြှင့်တင်ပြီးကျွန်ုပ်အားအစွမ်းကုန်ပေးသင့်သည်ဆိုပါက။
ယနေ့ငါ porn နှင့်အနိုင်နိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပယ်ရှားနိုင်သည်ကိုသဘောပေါက်ခြင်းနှင့်ငါ့ Os နောက်ဆုံးအကြိမ်အနည်းငယ်တူဘူး ငါ့ရည်းစားတောင်မှနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာအံ့သြမိတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဒီအကြောင်းဒီနေ့ရှာတွေ့ ငါတွေ့သမျှအချက်အလက်အားလုံးသည်အမျိုးသားများနှင့်သက်ဆိုင်သော်လည်း၎င်းနှင့်ဆင်တူချက်များစွာရှိသည်။ တကယ်တော့ M မတိုင်ခင်နှိုးဆော်ခြင်းမခံရခြင်း၊ P အစစ်အမှန်ဘဝနှင့်မကိုက်ညီသောအရာများပါ ၀ င်သည့်အစွန်းရောက် P ကိုကြည့်ခြင်းစသည်တို့မပါ ၀ င်နိုင်ခြင်း (P) မပါဘဲထွက်ပေါက်မရှိခြင်းသို့မဟုတ်နှိုးဆွခြင်းမရှိကြပါ။
ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာကိုအမြစ်တွယ်နေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အလွန် ၀ မ်းသာပါသည်။ ငါဘယ်တော့မှ * စွဲစွဲလန်းလန်းမရှိခဲ့ဘူး (ငြီးငွေ့စရာ) မရှိခဲ့ဘူး၊ ငါဟာတစ်နှစ်တောင်ဒါမှမဟုတ်တခြားသူတွေလို desensitizing အပြုအမူတွေကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာမြန်ဆန်ပြီးလွယ်ကူပါတယ်။ မင်းရဲ့ရလဒ်တွေကငါ့ကိုမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်စေတယ်။ ရွှင်လန်း! ^ _ ^ =
09 မှာ 06 / 2018 / 12: 37 နံနက်
YBOP အပေါ် Posted
09 မှာ 06 / 2018 / 12: 38 နံနက်
မင်္ဂလာပါ NoFap၊ ကျွန်တော်ခေတ္တခေတ္တစောင့်ဆိုင်းခဲ့ပြီး NoFap regimen ကိုစတင်သင့်မသင့်ကိုဆွေးနွေးငြင်းခုံနေပါတယ်။ ငါ hentai အတော်လေးနည်းနည်းဖတ်ပြီးနေ့စဉ်နီးပါးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုနားလည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏တုန်ခါခြင်းမှကျွန်ုပ်၏အစုတွင်သိမ်မွေ့မှုပျောက်ဆုံးသွားသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်သူငယ်ချင်းများကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်ကွက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်အလုပ်စီမံကိန်းများတွင်အသုံးစရိတ်များစွာလိုအပ်သောအချိန်များစွာကုန်ဆုံးသွားသည်။
သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်လျှင် Fapstronauts များစွာတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရပြီးကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်ဆွဲဆောင်ခံရမည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ငါနှင့်အဝေးတစ်နေရာမှဆက်ဆံရေးတွင်မိတ်ဖက်တစ် ဦး ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်မတော်တဆပေါက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်မလိုချင်သောအမှတ်အသားများကိုမလိုချင်ပါ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်မရဲ့နှုတ်အမူအကျင့်ဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိကြောင်း၊ အခြားသူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမှစိတ်မ ၀ င်စားကြောင်း၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်မမှန်တယ်လို့ပြောတဲ့အပြုအမူမျိုးကိုမဖွံ့ဖြိုးချင်ပါဘူး
တစ်လမျှ porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသို့မဟုတ် vibrators
09 မှာ 11 / 2018 / 3: 22 နံနက်
အမျိုးသမီး - ယောက်ျားနှင့်တစ်ယောက်တည်းအော်ဂဇင်မစွမ်းနိုင်၊ အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်း
ငါအတိအကျဖြစ်ရန်, 247 ရက်အကြာဇန်နဝါရီလ nofap စတင်ခဲ့သည်။ အကြောင်းပြချက်ငါကြိုက်သလောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွန့်ခွာသွားနိုင်သော်လည်းသူတို့လုပ်သမျှ၊ မည်မျှပင်ကြိုးစားခဲ့ပါစေမိတ်ဖက် (မည်သည့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်) နှင့်မှအော်ဂဇင်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ငါအသက် ၁၉ နှစ်တုန်းကငါ့ဘဝမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးဘူး၊ ငါဟာ PIV လိင်ဆက်ဆံမှုမှသာလျှင်အော်ဂဇင်ကိုလေ့ကျင့်လေ့ရှိတယ် (မိန်းမတော်တော်များများဟာရာသီဥတုကိုလှုံ့ဆော်ပေးတယ်၊ အသက် ၂၀ ပြည့်တဲ့အခါငါအော်ဂဇင်ကိုအတော်လေးအရသာရှိခဲ့တယ်။ တစ်ကိုယ်ရေတစ်ယောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျံ့နှံ့နေတဲ့ယုန် - အမှားကြီးကြီးမားမား၊ PIV O ရဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့ဖူးဘူး၊ လာမယ့် ၁၄ နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဟာယုန်ကနေစိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ (ဒါမှမဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ရှုခြင်း) လုပ်နိုင်မှာပါ။ လွန်ခဲ့သော ၆ နှစ်ကယုန်သည်ကျွန်ုပ်၏လက်ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင် O. အားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်။ ကြည့်ရှုခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အတိအကျတိတိကျကျဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်၊ နှင့် စိတ်ကူးယဉ်ထားတာဒါကြောင့်ငါမရှိခဲ့ဘူး။ ငါနဲ့လည်းငါ့ကြင်ဖော်နဲ့ကိုယ်ထိလက်ရောက်မနှောက်ယှက်နိုင်တော့ဘူး ကျွန်တော်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးအတူတကွအတူနေခဲ့ပြီးမီးပွားပျောက်သွားလို့ပါ။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ဒါကငါ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်နဲ့လက်တွေ့မကျတဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်စိတ်ကျေနပ်မှုရစေတဲ့အရင်းအမြစ်တစ်ခုပဲလို့ပဲ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ငါ့အကြံပေးချက်ကိုဒီဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းသောသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်တစ်စုံတစ်ရာသောလိင်ဆက်ဆံမှုအပေါ်သင်၏ဆန္ဒ၊ အခြားသူတစ် ဦး အပေါ်သင်၏တုန့်ပြန်မှု၊ သင်၏လိင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အော်ဂဇင်စွမ်းရည်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါကယခုစတင်လုပ်ဆောင်ရန်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အချိန်များစွာကြာမြင့်နိုင်ပြီး၊ အချိန်ကြာမြင့်စွာကြာမြင့်နိုင်ပြီး၊ asstination သည်တစ်ခါတစ်ရံမခံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်တတ်ပြီးသင်သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပြန်လည်နာလန်ထူလာလိမ့်မည်။ တစ်ခါတလေသင်ဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ခံစားရပြီးအဲဒါဟာအလုပ်မလုပ်ဘူးလို့ခံစားရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါပဲ လိမ့်မည် အလုပ်လုပ်ပါ အကယ်၍ သင်ကြိုးစားပြီးသည်နှင့်သင်ဖုန်မှုန်ပြီးသင်လဲကျပြီးနောက်ပြန်ပေါ်လာလျှင်ဖြည်းဖြည်းနှင့်သေချာသည်မှန်လျှင်သင့်စိတ်သည်နောက်ခံတွင်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်နေပါလိမ့်မည်၊ သင်၏ sensitivity နှင့်တုန့်ပြန်မှုသည်ပြန်လည်စတင်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်တော့ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်နှင့်ကစားရန်တစ်ယောက်ယောက်မရှိလျှင်၊ ကျွန်ုပ်၏ပြသနာများကိုသတိပြုမိပြီးကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ရှည်သည်းခံ။ ကျွန်ုပ်အားထပ်မံလေ့လာသင်ယူရန်ဆန္ဒရှိသူမည်သူမဆိုကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်သည်အလွန်မြင့်မားလွန်းသဖြင့် လိင်မပါဘဲ။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး PA လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကကျွန်တော့်ကိုအပတ်စဉ်လများစွာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပေးခဲ့တယ်။ အဲဒါကမှအော်ဂဇင်မရှိတော့ဘူးဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ချင်စိတ်ရှိတယ်၊ ငါ့စိတ်ကိုပြန်လည်လေ့လာသင်ယူသည်။ ဒီလိုမျိုးကစားခြင်းနှင့်နားလည်မှုမျိုးလိုအပ်ပါတယ်။